Guddiga Doorashada Dadban oo shaaciyay tirada xildhibaanada ilaa iyo hadda la doortay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Guddiga Doorashada Dadban oo shaaciyay tirada xildhibaanada ilaa iyo hadda la doortay
Guddiga Doorashada Dadban oo shaaciyay tirada xildhibaanada ilaa iyo hadda la doortay
Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay in ilaa iyo hadda doorashooyinka ka soconaya xarumaha maamul-gobaleedyada lagu doortay 155 xildhibaan oo 20 ka mid ah yihiin dumar.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in xubnaha Aqalka Sare ee la doortay ay yihiin 43 xubnood , halka doorashada Aqalka Hoosana ilaa iyo hadda la doortay 112 mudane.
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Dadban Abuukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhagey, ayaa sheegay in ay baaritaan ku wadaan sidoo kale Musuq maasuq la sheegay in ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee guuleystay.
Beesha Caalamk iyo Madasha Hogaamiyayaasha Qaran ayuu ugu baaqdey in ay awoodooda u isticmaalaan in ay wax uga qabtaan ugana hortagaan xad gudubka iyo cadaalad darada ka dhex jirta hanaanka doorashada.
Halkan ka dhagayso codka Gudoomiyaha Gudiiga Doorashooyinka Dadban.
Previous articleGudoomiyaha Degmada Waabari oo xilka laga qaaday
Next articleRW Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida xildhibaan Daahir Xaaji Geelle